WordPress: एक शीर्ष सन्देश बार जोड्नुहोस् Martech Zone
आइतवार, नोभेम्बर 27, 2011 सोमबार, नोभेम्बर 28, 2011 Douglas Karr
नयाँ साइटको साथ, म खोजी गर्दै थिएँ WordPress को लागी शीर्ष पट्टी धेरै समय को लागी। हाम्रो अन्तिम थिम डिजाइन वास्तव मा एक पूरै सेक्सन थियो कि तान्न सकिन्छ कि विज्ञापन को लागी ईमेल सदस्यता। यसले ग्राहकहरूको संख्या यति धेरै बढायो कि मैले सदस्यता क्षेत्र सिधा विषयवस्तुको हेडरमा समावेश गर्‍यो।
अब म केवल एक चाहान्थे माथिल्लो पट्टी कुनै पनि मुख्य सन्देशहरूमा पाठकहरूलाई अद्यावधिक राख्न हामी तिनीहरूलाई उनीहरूको बारेमा सम्झना गराउँन चाहन्छौं ... समाचार र घटनाहरू सहित। म यसलाई हाम्रो विषयवस्तुमा सीधा लेख्न गइरहेको थिए तर फेला पारे WP-टपबार, WordPress मा एक राम्रो लिखित शीर्ष बार प्लगइन। त्यहाँ अरू केहि थिए जुनसँग अन्य सुविधाहरू छन् ... जस्तै घुम्ने सन्देशहरू वा सन्देश तालिका, तर यस प्लगइनको सरलताले तिनीहरूलाई जित्यो।
मैले प्रशंसा गर्‍यो कि पृष्ठ सामग्रीको शीर्षमा शीर्ष पट्टी हार्डकोड गरिएको थिएन; यसको सट्टामा, यो गतिशील रूपमा उत्पन्न गरिएको छ र सेटिंग्सको साथ देखा पर्दछ जुन यस प्रदर्शनको लागि ढिलाइ र गति समावेश गर्दछ ... साँच्चै राम्रो स्पर्श! तपाईं पट्टीको रंग (र पृष्ठभूमि छवि) लाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ, सन्देश, लिंक थप्न, र यहाँ तपाईंको आफ्नै सीएसएस लागू गर्नुहोस्। प्रशासनसँग पूर्वावलोकन पनि छ त्यसैले तपाईं यसलाई लाइभ राख्नु अघि तपाईंको सबै परिवर्तनहरूको पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट, त्यहाँ केहि शीर्ष बार प्लगइनहरू छन् जुन बजारमा पैसा चार्ज हुँदैछ ... तर मलाई लाग्छ कि यो अधिक मूल्यवान छ!
अद्यतन: मैले प्लगइनमा केहि अपडेट गरे। यो अब wp_footer बाट लोड हुँदैछ wp_head भन्दा (यो WordPress हो एपीआई कुरा गर्नुहोस्) र मैले डिभ लाई अपडेट गरें आईडी हुन र यससँग सम्बन्धित भन्दा पट्टी फिक्स गर्न स्टाइलिंग गर्न। यस तरिकाले तपाईले पृष्ठ तल स्क्रोल गर्दा बार राखिन्छ।
टैग: सन्देश बारसन्देश बार प्लगइनउपकरणपट्टीमाथिल्लो पट्टीशीर्ष बार प्लगइनWordPress प्लगइनWordPress शीर्ष पट्टीwp_footerwp_head
तपाईं शर्त, जर्ज!
डिसे 11, 2011 मा 1: 18 AM
शीर्ष सन्देश पट्टी साँच्चै पप हुन्छ।
डिसे 11, 2011 मा 1: 45 AM
मार्क्स 21, 2012 मा 10: 17 PM
मैले तपाईंको लिंक प्रयास गरे तर प्लगइन अब त्यहाँ छैन। म यसलाई कहाँ बाट प्राप्त गर्न सक्छु?
सेप्टेम्बर 7, 2012 मा 8: 51 AM
यो मेरो लागि किन काम गर्दैन? मैले यो प्लगइन केहि6महिना पहिले प्रयास गरें र मैले कसरी पत्ता लगाउन सकिन। यो पूर्ण रूपमा स्थापित छ र मैले सेटिङहरू सही रूपमा व्यवस्थित गरें तर मलाई लाग्छ कि यो गृह पृष्ठ वा पृष्ठ आईडीमा देखा पर्दैन जुन मैले यसलाई सेट अप गरेको छु। अब यो काम गर्न मलाई एक घण्टा भन्दा बढी लाग्यो। म थाकेको छु। कसैले मद्दत गर्नुहोस्!
हो मैले समय पनि सहि सेटअप गरेको छु। (मिलीकोडमा) र मिति पनि। अब म के मिस गर्छु?
सेप्टेम्बर 7, 2012 मा 9: 26 AM
सायद अर्को प्लगइन संग विवाद को केहि प्रकार? तपाईले सबै प्लगइनहरू असक्षम पार्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि त्यो मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ।
मार्स 19, 2013 मा 1: 03 एएम
धेरै प्रयास पछि काम भयो। यसले यसलाई फिक्स गर्‍यो - पूर्वनिर्धारितमा रिसेट गर्दै। हालको संस्करण कुनै समस्या बिना काम गर्दछ
शेयरको लागि धन्यबाद, जे खोज्दै थिएँ।
महान पोस्ट को लागी धन्यवाद। म ठ्याक्कै यो खोज्दै थिएँ। यद्यपि म "हेलो बार" विकल्प खोज्दै थिएँ र कुनै पनि मेरो लागि काम गरिरहेको देखिएन। यो अन्तरदृष्टि पोस्ट को लागी धन्यवाद।